နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဝါးထုတ်ကုန်များ > ဝါးသွားပွတ်တံ > အမြီးပါသောဝါးသွားပွတ်တံ
Transparent Cylinder Bamboo Toothpick-1
Green Cylinder Bamboo သွားကြားထိုးတံ
ပန်းရောင် Cylinder Bamboo သွားကြားထိုးတံ
ပန်းရောင်ပုလင်း Bamboo သွားကြားထိုးတံ
အမြီးပါ ၀ င်သောသွားပွတ်တံ ၎င်းသည်ကိုင်တွယ်နိုင်သော brush တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သွားတိုက်ဆေးကိုစုတ်တံထဲသို့ပေါင်းထည့်ပြီးခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်သွားအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုထပ်ခါတလဲလဲဖြီးသည်။
ဝါးသွားပွတ်တံ၊ ပျော့ပျောင်းသော၊ ကွန်ကရစ်ခြေရင်း၊ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး၊ အိမ်သုံးစူပါမားကတ်ဟိုတယ်လက်ကား ၎င်းသည်ကိုင်တွယ်နိုင်သော brush တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သွားတိုက်ဆေးကိုစုတ်တံထဲသို့ပေါင်းထည့်ပြီးခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်သွားအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုထပ်ခါတလဲလဲဖြီးသည်။
အသုံးပြုပြီးတိုင်းသွားပွတ်တံကိုသေချာဆေးပါ၊ ရေကိုတတ်နိုင်သမျှစွန့်ပစ်ပါ။ သွားပွတ်တံခေါင်းကိုပလုတ်ကျင်းခွက်တွင်ထားပါ၊ သို့မဟုတ်အခြောက်ခံပြီးပိုးသတ်ရန်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်ထားပါ။
အခြေအနေများခွင့်ပြုလျှင်သွားပွတ်တံနှစ်ချောင်းသို့မဟုတ်သုံးချောင်းကိုသွားပွတ်တံ၏ခြောက်သွေ့မှုကိုကြာရှည်စေရန်တစ်ပြိုင်နက် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် gingivitis နှင့် periodontitis ရှိသူများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်လှည့်ခြင်းသည်လည်းသွားပွတ်တံ၏အမွေးအမှင်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
ချောင်သို့မဟုတ်တွန့်နေသောအမွေးအမှင်များနှင့် elasticity ဆုံးရှုံးသွားသောသွားပွတ်တံအဟောင်းကိုအချိန်မီအစားထိုးရမည်၊ မဟုတ်လျှင်သွားနှင့်သွားဖုံးအတွက်မကောင်းပါ။
သွားပွတ်တံကိုအိမ်သာ (သို့) ရေချိုးခန်းထဲမှာမထားသင့်ဘူး၊ သန့်ရှင်းရေးအသုံးအဆောင်တွေနဲ့လည်းအကွာအဝေးတစ်ခုထိထားသင့်တယ်။
ကုန်ပစ္စည်းနံပါတ် LY-BT-၀၇ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း လက်ခံပါ
သတ်မှတ်ချက် ၁၁*၂၅*၁၈၈ မီလီမီတာ ပစ္စည်း ဝါး
အရောင် ဝါး color မူလ ဖူဂျီယန်
ပျက်စီးစေနိုင်သည် ဟုတ်သည် တစ်ခါသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ဟုတ်သည်
ဝါး products refer to products made of bamboo as processing raw materials, most of which are daily necessities, such as bamboo toothpick, bamboo toothbrush, bamboo basket, bamboo strainer, Shau Kei, bamboo steamer, broom, bamboo dustpan, bamboo dustpan, bamboo rake, bamboo basket, bamboo pole, bamboo chopsticks, bamboo broom, bamboo hat, plaque, bamboo basket, bamboo mat, bamboo mat, bamboo bed, bamboo chair, bamboo couch, bamboo chopping board, Mat, Tea Cup Mat, curtain, etc. , in recent years, there are more popular bamboo products, bamboo flooring and bamboo furniture, some of higher value, such as bamboo carving and other folk crafts.
ဝါး toothbrush, as the name suggests, isatoothbrush made of bamboo. It has the characteristics of toughness, wear resistance, softness and smoothness.
ဝါး toothbrush material:
ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုနှင့် ၀ တ်ဆင်မှု၊ ထူးခြားသောခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ နူးညံ့ချောမွေ့သည်
ပေါင်းစပ်အမွေးအမှင်များတွင်လက်ဖက် polyphenols ၏ရောစပ်မှုသည်သွား၌တည်နေသော lactic acid ဘက်တီးရီးယားများနှင့်အခြား caries ဘက်တီးရီးယားများကိုသတ်နိုင်ပြီးဂလူးကို့စ် polymerase ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဟန့်တားသည်။ သွားများပေါ်တွင်စိုက် ထား၍ သွားပိုးစားခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုရပ်တန့်စေသည်။
၎င်းသည်အစိမ်းရောင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ကာဗွန်နိမ့်များ၏လက်ရှိလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော biodegradable သွားပွတ်တံဖြစ်သည်။
hot Tags:: အမြီးကြီးများနှင့်နှီးသွားပွတ်တံ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားဝယ်၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
အထူကွေးဝါးသွားပွတ်တံ - ကလေးများပုံစံ
အထူကွေးဝါးသွားပွတ်တံ - အရွယ်ရောက်သူများ၏ပုံစံ
Add: နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးအဆောက်အအုံ၊ အမှတ် ၂၂ Xipan လမ်း၊ Nancheng, Xinluo ခရိုင်၊ Longyan၊ Fujian၊ တရုတ်
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် E-commerce ဌာန ၄၀၃၊ ၄၀၅ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် E-commerce လူမှုဂေဟစနစ်များ၊ အမှတ် ၂ Huangbang လမ်း၊ dongxiao စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်၊ xinluo ခရိုင်၊ longyan၊ Fujian၊ တရုတ်
မူပိုင်ခွင့်© ၂၀၂၁ Fujian Longyan သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီလီမိတက် မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု: Quanzhou Tian Yu Network Technology Co. , LTD Robin 18060016339